पाथिभरा माताको दर्शन गरी भेटी स्वरूप यक शेयर गर्दै पढ्नुहोस् ,भोली भदौ १० गते बुधबार को राशिफल पढ्नुहोस् – Khabar PatrikaNp
पाथिभरा माताको दर्शन गरी भेटी स्वरूप यक शेयर गर्दै पढ्नुहोस् ,भोली भदौ १० गते बुधबार को राशिफल पढ्नुहोस्
August 25, 2020 174
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ):- नयाँ कार्य थालनिका निम्ती समयले विशेष साथ दिनेछ । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रबाट उत्तम लाभ प्राप्त रहनेछ । यात्रामा भने विशेष सा’व’धा’नि अपनाउनु राम्रो हुनेछ । साझेदारी कार्यबाट विशेष लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्ययन अध्यापनमा लगाइएको समयको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो):- भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय व्यतित रहनेछ । गररिहेको कार्यमा सामान्य ढिलाइको योग रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा समय मध्यम रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुरा कार्य हरु सम्पादित रहनेछन । गैरव्यत्तिहरुको विश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
मीथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह):- मित्रजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्तरहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बल तथा प्रराक्रममा वृद्धि हुनेछ ।अध्ययन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । सामान्य यात्राकारक समय रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ । पूरानो लगानि उठाउन समेत समयले साथ दिनेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो):- मान्यजनसंगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर व्यक्तित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । वाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे):- नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र शाहसको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । साझेदारी कार्यमा हात नहालेकै वेश रहनछ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो):- नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै वेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । गैर व्यक्तिहरुको विश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ । जिवन साथीको सहयोगद्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भावना रहेकोछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते):- मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा विशेष सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय व्यतित रहनेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु):- मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि व्यापार व्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । अप्रिय खवरको श्रवणले मनमा सामान्य चिन्ता प्राप्त रहने दिन रहेकोछ। मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे):- धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । मानसम्मानमा आ’घा’त पर्नसक्ने सम्भावना रहेकोछ। यात्राका क्षेत्रमा विशेष सा’व’धा’नि अपनाउनु होला । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट व्यर्होनु पर्ला । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि):- वाणिको कारण दाम्पत्य सुखमा वाधा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । ईष्टमित्रबिच सामान्य वादविवादको योग रहेको छ । मनोविलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द):-जिवनसाथीको साथ सहयोगद्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोगविलासको क्षेत्रमा समय व्यतित हुन सक्छ। आम्दानि मध्यम रहला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । परोपकार तथा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि):- स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभावको सामना गर्नु पर्ला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रु’ष्ट रहन सक्छन । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला ।
Prevकुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा निरन्तरता दिने कुनै निर्णय भएको छैन : उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन
Nextशरीर कमजोर भए पनि बलियो छ सोच..!
तेल बोकेको ट्याङ्करको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
डोटी जिप दुर्घटना ,4जनाको ज्यान गयो
माता मनोकामना माइको दर्शन गर्दै वि.सं.२०७७ साल भाद्र २७ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस !
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33891)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32065)